Sawir gacmeedka midabka pixel ee Midabada Jacaylka ee Android | Androidsis
Midabbada Jacaylku waa buug midabeeye kartoon ah oo lagu nasto
Midabada Jacaylku waa ciyaar sawiro midabayn ah inuu ku fuulo tareenka hadda ee buugaagta dhabta ah iyo inay aqbalaad aad u wanaagsan ka helayaan dadka da 'kasta leh; qaasatan sida ay ugu raaxeysan tahay midabeynta sawiradaas oo aakhirka noqonaya shaqooyin yaryar oo farshaxan ah.
Ujeeddadu waa kulankaan oo aan ku yeelan doonno sawirro badan oo aan ku midabeyno lambaradaas oo noo sheegi doona halka aan farta ku dhigeyno midabkiisa. Ciyaar fudud oo noo oggolaan doonta inaan qaadno is deji adoo dhaweynaya si ay kuugu fududaato dhagsii mid kasta oo ka mid ah sanduuqyada ka kooban sawirradaas.
1 Makaanik fudud
2 Dhammaan noocyada mawduucyada midabaynta
3 Tirooyinka la socda
Midabada jaceyl se oo lagu garto isdhexgal kaas oo noo ogolaanaya inaan doorano midabada sidaa darteed waxaa lagu muujiyey shaxanka sawirka inuu midab yeesho si aan ugu soo dhaweynno aagga. Sidan ayaa noo sahlanaan doonta inaan helno midabkaas oo ku xiran lambar.
Taasi waa midab kastaa waa lambar waana inaan fiirino tusaalaha meesha aan ku midabeyneyno. Waa wax aad u fudud, maadaama mar kasta oo aan gujino mid ka mid ah midabbada midabka ah ee aan ka helnay salka shaashadda, aagga midabkiisu uu midab yeelanayo wuxuu yeelanayaa hadh muujinaya aagga.
Así Waxaan ku sawiri doonaa "farta" farta marka mid walba gujinayo ee fagaarayaasha sidii inaanu rinjiyeynay. Waxaan sidoo kale haysannaa ikhtiyaarka ah inaan gujino mid kasta oo ka mid ah sanduuqyada si ay midabbo u yihiin, laakiin xilligan aan ku tababbarano way fududaan doontaa in lagu raaco fartaada.
Dhammaan noocyada mawduucyada midabaynta
Midabada Jacaylku waa a ciyaarta da 'kasta oo aan ku hayno sawirro kala duwan oo midab leh. Miraha, xayawaanka, dadka, magaalooyinka, iyo taxane kale oo mawduucyo ah si aan marwalba u helno wax aan ku midabeyno.
Haddaan intaas ku dareyno ciyaarta waxaa lagu cusbooneysiin doonaa sawirro cusub waxoogaa yar, waxaan haysanaa saacado wanaagsan oo aan ku qaadan karno taleefanka gacanta, kuna ballaarinayno laba farood oo aan sidaas ku billaabayno midabaynta. Taasi waxay tidhi, sawiradu waxay leeyihiin dhibco aad uqurux badan oo farshaxanka pixel ah, markaa haddii aad abuuri jirtay farshaxan noocan ah, waxay sidoo kale ku timaaddaa tabobar ahaan.
Iran qaadashada qaab weyn markaan kusii socono codadka oo dhammaystir. Mar kasta oo aan dhammaystirno midabka midabka, waxaan si toos ah ugu beddeleynaa mid kale, markaa naftaada u dulqaado samir si aad u hesho lambarradaas oo aad u dhammaysato midabaynta sawirrada.
Tirooyinka la socda
Waa run in laga yaabo midka ugu adag waa markaan balaadhino sawirka oo waxaan bilaabaynaa inaan aragno dhammaan tiradaas lambarada ku xiran codadka. Waxay noqon kartaa xoogaa wareer ah haddii aanan awoodin inaan diirada saarno, waana laga yaabaa inay tahay waxa kaliya ee wax yar u dhimaya khibrada midabaynta ee ciyaartan lacag la’aanta fiican.
Ciyaar taas muuqaal ahaan ku guuleysta tiro badan iyo taas oo waxqabadka sidoo kale kaamil yahay. Waxa kaliya ee aan soo sheegnay, tirooyin aad u tiro badan oo shaashada ka muuqdaa waxay noqon karaan kuwo jahwareer leh, marka adiga kugu hagi midabada hoose si aad si fiican ugu hesho midabada oo aad si fiican ugu raadiso midabada.
Midabada Jacaylka waa ciyaar bilaash ah oo aad ku haysato Play Store si aad ugu raaxeysato daqiiqadda ugu horreysa ee nasashada taas oo ah inaad midabeyso sawiradaas wanaagsan ee aakhirka noqda shaqooyin yar yar oo rinji ah. Haddii aad horeyba u rabtay inaad midab kale u yeelato heer kale, waxaan kugula talineynaa ciyaartayada 'COOL Androidsis' ee bisha Luulyo: Marco bisadda Inked.
Waqtigiisa wuxuu ku qaataa midabaynta daraasiin sawir oo bilaash ah.
Midabaynta leh midabyo badan oo midab leh
Sawirro kala duwan
Baro sida loo sawiro farshaxanka pixel
Lambarro aad u tiro badan oo shaashadda mararka qaarkood ah
Midabbada Jacaylka: Buugga Midabaynta
Developer: Ciyaaraha Vixa
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Midabbada Jacaylku waa buug midabeeye kartoon ah oo lagu nasto
Waxaan horey u ogaanay goorta 'Surface Duo', taleefanka gacanta ee isku laaban Microsoft, uu suuqa soo gali doono
Laba badhan oo Lulu ka caawinaya inay oroddo oo ka booddo buuraha Lulu Run